ह्वाइट हाउस भित्रै छिर्यो कोरोना! – PathivaraOnline
Home > विश्व > ह्वाइट हाउस भित्रै छिर्यो कोरोना!
admin May 9, 2020 विश्व	0
ह्वाइट हाउसमा कार्यरत अमेरिकी राष्ट्रपतिका निजी सुरक्षा सहयोगीमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टी भएलगत्तै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सकी प्रेस सेक्रेटरीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । शुक्रबार प्रेस सेक्रेटरी कैटी मिलरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा आयोजित रिपब्लिकन सांसदहरुसँगको भेटघाटमा बताए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले मिलर आफूसँग सम्पर्कमा नआएको तर उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग भने सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएका छन् । मिलर पत्रकारहरुसँग भने नियमित सम्पर्कमा थिइन् । अहिले ह्वाइटहाउसले पत्रकारहरुका लागि कोरोना भाइरसको परीक्षण उपलब्ध गराएको छ ।
कैटी मिलर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका बरिष्ठ सल्लाहकार स्टेफन मिलरकी पत्नी हुन् । यसअगाडि ह्वाइट हाउसको वेष्ट विङमा कार्यरत अमेरिकी सेनाका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको थियो । ती अमेरिकी सेनाका अधिकारीले हवाइट हाउस क्याम्पसमा काम गर्दै आएका थिए ।
नेभीमा कार्यरत ती अधिकारीले ट्रम्पको निजी सहयोगीका रुपमा काम गरेका थिए । बुधबार लक्षण देखिनु अगाडि नै उनलाई परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको हो ।
फेरि थपियो नेपालमा ७ जना कोरोना सँक्रमित, १०९ पुग्यो
युक्रेनी वायुसेवाको विमानलाई इरानी फौजले खसालेर ६३ क्यानेडालीको निधन भएपछि क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले लिए इरानसंग यस्तो एक्सन !